पूर्व डिआइजी रमेश खरेल भ्रष्टाचारी नेता र गुण्डा नाइकेको अगाडी यसरी झुक्थे ! | Diyopost
पूर्व डिआइजी रमेश खरेल भ्रष्टाचारी नेता र गुण्डा नाइकेको अगाडी यसरी झुक्थे !
काठमाडौं, २९ कार्तिक । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल खरो स्वभावका लोकप्रीय प्रहरी अफिसर मानिन्छन् । आफू काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी हुँदा होस् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेट्न समेत नगएको भन्दै खोक्ने खरेल भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भोगेर आएका पूर्व गृहमन्त्री स्वर्गिय खुम बहादुर खड्का र गुण्डा नाइकेको रुपमा चिनिएका मिनकृष्ण महर्जनअघि भने कसरी झुक्थे भन्ने प्रमाण भेटिएको छ ।
राजनीतिक दलमा नेताहरुलाई गाली गलौज गरेर मात्रै होइन गुण्डा नाइकेलाई तह लगाएर आएको भन्दै चर्चा कमाएका खरेल भ्रष्टाचारबाट डामिएका नेता र गुण्डा नाइकेकै अघि भने झुक्ने गरेको पाइएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सन् २०१६ मा अपलोड भएको यो तस्विरमा खरेलले पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता खड्का अघि झुकेका छन् । अघिल्तिर रहेका क्याप लगाएका ललितपुरका गुण्डा नाइके मिनकृष्ण महर्जनसँग पनि झुके जस्तो देखिने यो तस्विरले खरेलको चकलेटी छवी भद्दा नाटक मात्रै भएको प्रष्ट्याउँछ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुख तथा महानिरिक्षकमा बरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेसँगै खरेल असन्तुष्ट भएका थिए । आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै खरेलले गत चैत्र २८ गते डिआइजी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
दियोपोस्ट डटकममा ‘पूर्वडिआइजी रमेश खरेल भ्रष्टाचारी नेता र गुण्डा नाइकेको अगाडी यसरी झुक्थे’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा मिनकृष्ण महर्जनले खण्डन गरेका छन् । उक्त समाचारले आफ्नो मानमर्दन र चरित्रहत्या गरेको भन्दै महर्जनले समाचारको खण्डन गरेका हुन् । दियोपोस्टको आधिकारीक इमेलमा खण्डन गर्दै महर्जनले उक्त समाचारले आफू र आफ्नो परिवारलाई मानसिक तनाव दिएको बताएका हुन् ।
‘समाचारमा मलाई गुण्डा नाइके भनिएको रहेछ । मलाई गुण्डा नाइकेको उपाधि दिने अधिकार यस अनलाइनले कहाँबाट प्राप्त भयो ? दिवंगत भइसकेका एकजना नेता र नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकृतसँग मेरो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने अधिकार कसले दियो ? यस अनलाइनले मेरोविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गर्नु नै थियो भने किन मेरो भनाइ राखिएन ? नेपालको संविधान र कानून उल्लंघन गर्ने अधिकार यस अनलाइनलाई छ कि छैन ? यस्ता मनगढन्ते र चरित्र हत्या गर्ने समाचार लेख्न पाइन्छ कि पाइँदन ? खण्डनमा जवाफ पाउँ,’ खण्डन गर्दै महर्जनले लेखेका छन्,‘सो समाचारले म र मेरो परिवारलाई मानसिक तनाब दिएकोले समाचार खण्डन गर्नका लागि आग्रह गर्दै आउँदा दिनमा यस्ता आधारहीन समाचार सम्प्रेषण नहोस् भन्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री ओली निकट रघुवीर महासेठको जन्मदिन मनाउन भारतीय राजदूत भैसेपाटीमा !